सुर्खेत- वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष मोति कंडेलले घर नै नबनेको जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित गर्न जाने सेवाग्राहीसँग 'घरबहाल कर' तिरेको रसिद मागे । शुरूमा त खाली जग्गाको घरबहाल कर तिरेको रसिद माग्ने वडाअध्यक्ष झुक्किए झैं माने जग्गाधनी कमल खड्का जुनीले । तर आफू 'पावरफूल' वडाअध्यक्ष भएको भन्दै वडाअध्यक्ष कंडेलले घरबहाल कर तिरेको रसिद माग्न छाडेनन् ।
सेवाग्राही जुनीले भने, 'खाली जग्गाको कसरी घर बहाल कर तिरौं भनेर मैले अनुरोध गरें, तर वडाअध्यक्षले आफू अधिकार सम्पन्न भएको बताउँदै घरबहाल कर नतिरेसम्म हस्ताक्षर नगर्ने अड्डी लिनुभयो ।'
त्यसपछि जग्गाधनी जुनीले खाली जग्गाको घर बहाल कर तिर्नुपर्ने भन्दै लिखित रूपमा दिन माग गरे वडाअध्यक्षसमक्ष । तर वडाअध्यक्षले टेरपुच्छर लगाएनन् । 'अनि म बाध्य भएर मिडियामा आएको हुँ,' खड्काले भने, 'मलाई साढे दुई घण्टा नगरपालिकामा रोकियो । अन्य वडा कार्यालयबाट मैले जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित गरी ल्याउन मिल्ने तर त्यहाँ नमिल्ने कारण जान्न खोजेको थिएँ ।'
जुनीले भने, 'तर अन्त्यमा जे गर्नु हुन्छ गर्नुस् म सहि गर्दिन भनेर वडा अध्यक्ष कंडेलले भन्नु भयो ।’
वडा कार्यालयबाट आफूले दुई कित्ताको १ हजार ५० रुपैंया तिरेको जानकारी खड्काले दिए । ‘वडा नं. ६ को कित्ता नम्बर ३९५२ र ४७०३ को जग्गा मेरो श्रीमतीको नाउँमा रहेको छ,’ व्यवसाय समेत गर्दै आएका जुनीले भने, ‘हामी बुझेका व्यक्तिलाई त वडा अध्यक्षको यस्तो व्यवहार छ भने सर्वसाधारण प्रति उनको कस्तो शासन होला ?’
त्यस्तै केहि दिनअगाडि वीरेन्द्रचोकका नाबालक सालीन भारतीको नाममा रहेको जग्गाको बारेमा पनि अध्यक्ष कंडेलले त्यस्तै व्यवहार देखाएका थिए । अध्यक्ष कडेलले आफू वडा अध्यक्ष रहेको र आफू अरु केही कानून-सानून नमान्ने भन्दै वरपर रहेका कांग्रेस समर्थकलाई जबरजस्ती सो जग्गामा नाली खन्न लगाए ।
यदि बाटो नै भएपनि मुआब्जा दिनुपर्ने वा दुवै पक्षसंग छलफल गराउनु पर्नेमा उनले जबरजस्ती गरेर स्थानीयलाई नाली खन्न लगाए । दुवै पक्षसंग छलफल नगरी उनले हरेक काम जबरजस्ती गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा वडाध्यक्ष कंडेलले अहिले आफू कार्यपालिका बैठकमा भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिले म कार्यपालिका बैठकमा छु हजु्र,’ उनले भने, ‘पछि कुरा गरौंला ।